छपाइ बिग्रेका नोट बजारमा ! – Rastriyapatrika
छपाइ बिग्रेका नोट बजारमा !
काठमाडौँ — छपाइ बिग्रेका नेपाली नोट आजकल बजारमा बढी भेटिन थालेका छन् । त्यस्ता नोटमध्ये केहीमा गभर्नरको हस्ताक्षर छैन, केहीमा एकातर्फ सादा कागज मात्र छ भने केहीमा नबुझिने खालको मधुरो प्रिन्ट छ । कान्तिपुर दैनिक मा समाचार छ ।